Bogga ugu weyn 20 Waxyaabo Fudud Oo La Samayn Karo Oo La Iibiyo 2022
Ma ka fakaraysaa waxaad samayn lahayd si aad dakhli dheeraad ah u samayso? Waxaa laga yaabaa in liis wax lagu sameeyo oo laga iibiyo dadka. Waxa jira waxyaabo badan oo la yaab leh oo aynu si fudud u samayn karno oo aynu si fudud u iibin karno.
Dad badan ayaa raba inay bilaabaan dhaqdhaqaaqyo dhinac ah laakiin waxay dareemaan inay kala go'an yihiin oo ay jahawareersan yihiin oo aan haba yaraatee wax fikrad ah ka haysan waxa ay samaynayaan, markaa baahida maqaalkan oo adiga kuu caddaynaya maadaama ay fududahay inaad akhrido liis dheer oo ah waxyaabo la sameeyo oo la iibiyo. qofna kuuma shaqayn doono.
Maqnaanshaha door ka wanaagsan sida in la ogaado qof haysta tiro ka mid ah shaqooyinkan oo ku guulaysta, maqaalkani wuxuu u adeegaa inuu kuu soo bandhigo 20 shay oo sahlan oo aad samayn karto oo aad ku iibin karto kuwaas oo hubaal ah inay kuu keeni karaan xasilooni iyo lacag.
Waxyaalo Aad Iibin Karto Balse Aan Samayn
2. Jumladaynta Hantida ma-guurtada ah
1. Dharka gacanta lagu sameeyo
2. Shandad gacmeedyo
3. Logo funaanado
4. Dambiillo hadiyadeed
7. Dahab ka samaysan
14. Koorsooyinka khadka tooska ah
17. Baararka saabuunta
18. Nakhshad sawireed
19. Kukiyada guryaha lagu sameeyo
Su'aasha laga yaabo inaad is waydiinaysay ayaa ah haddii uu jiro suuq lagu iibiyo alaabooyinka gacanta lagu sameeyo iyo haddii dadku iibsan lahaayeen waxyaabaha aad rabto inaad samayso oo aad iibiso. Jawaabtu waa haa.
Sharaxaada dheer ayaa ah in ay caan tahay, sidaas darteed waxaa jira tartan badan, taas oo macnaheedu yahay inaad si adag u shaqeyso si aad u kala fogaato. Kaliya maaha su'aal ku saabsan gacan-ku-samaynta vs tiro-badan.
Waa inaad ganacsi ahaan u fikirtaa oo aad ka bilowdaa heer deegaan. Natiijo ahaan, aad ha ugu xidhin alaabtaada hore. Tixgeli dhammaan kharashyadaada, iyo sidoo kale macaamiisha aad ka iibinayso iyo sababta ay u rabaan alaabtaada.
Alaabooyinka gacanta lagu sameeyo inta badan looma baahna, maadaama ay la socdaan alaab dhaqameed, laakiin halkii ay rabaan, markaa waa inaad tixgelisaa sida aad u bixin doonto qiimaha ugu badan. Haddii ay doonayso inay iibiso, gacan-ku-sameedka macnihiisu waa caafimaad, ka wanaagsan, ama kala soocan.
Su'aalo dhowr ah oo ay tahay in laga fikiro: Muxuu qof u iibsanayaa alaabtan? Waa ayo iibsadahayga suurtogalka ah? Ma jiraan wax gaar ah oo ku saabsan alaabta? Soo ogow waxa xalku yahay.
Haddii aad hesho jawaabo wanaagsan, waxaad heli doontaa fursad aad u wanaagsan oo aad ku iibiso alaabtaada oo aad dadka ku iibsatid. Marka la iibinayo gudaha ama dibadda, cilmi-baarista ugu horreysa isbeddellada suuqa.
Si loo hubiyo inaad dhisto saldhig isticmaale oo ku filan, waxaad u baahan doontaa degel, kanaalka YouTube, iyo baraha kale ee warbaahinta bulshada, laakiin marka aad haysato dhegaystayaal ku jecel oo ku kalsoon, way fududahay inaad ku taliso alaab tayo sare leh iyo hel guddiyo waaweyn oo iib ah oo aad soo saarto.
marketing affiliate waxa laga yaabaa inay noqoto hawl dhinaceed si weyn u guulaysata oo soo saarta dakhli aan sal lahayn muddo sanado ah haddii aad diyaar u tahay inaad dulqaad yeelato.
Si aad u bilowdo, ka samee waxyaabo cajiib ah aag gaar ah oo la kaasho kuwa laxidhiidha kuwaas oo ku siin doona komishan yar si aad u suuqgayso alaabtooda.
Waxay qaadan doontaa ku dhawaad ​​6 bilood oo ah wax soo saar joogto ah si aad u aragto soo-noqosho la taaban karo, laakiin marka aad bilowdo, waxaad si fudud u kasban kartaa boqolaal kun oo doolar sanad kasta adigoon waligaa samaynin wax soo saar.
Sidoo kale eeg: 10ka Alaabta Dijital ah ee ugu Wanaagsan ee La Iibinayo 2022
Marka aadan haysan raasamaal ama khad deyn ah oo aad ku maalgashato guri, jumlo iibinta hantida ma-guurtada ah waa mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee lacag looga sameeyo warshadaha.
Waxa aad garanaysaa dadka u baahan in ay guryahooda iibiyaan ( kuwa is furay, dad hanti laga dhaxlay, iyo kuwo dhaqaale xumo haysata), gurigaas oo qandaraas la galay, ka dibna ka iibi qandaraaska qandaraasle lacageed oo xidhi kara 30 maalmood gudahood.
Tusaale ahaan, ka soo qaad inaad heshay $400,000 guri leh iibiye dhiirigelinaya oo raba inuu ku iibiyo $360,000. Waxaad guriga ku dhejin kartaa qandaraas $360,000, ka dibna ka iibi $400,000 maalgeliyahaaga, adigoo ilaalinaya $40,000 khidmadda meelaynta.
Uma baahnid shati si aad u bilowdo, laakiin waxaan si adag kuugula talinayaa inaad maalgeliso barnaamijka tababarka ee Clever Investor sababtoo ah haddii aadan ka taxaddarin sida aad u sameysato qandaraasyada, waxaad si dhakhso ah u geli kartaa dhibaato sharci.
Halkan waxaa ah liis waxyaabo aad samayn karto oo aad iibin karto si aad lacag u samayso;
Dharka diyaarka u ah in la xidho waa dhar si ballaaran loo soo saaray oo tiro badan. Mashiinno waaweyn ayaa u dhisa cabbir go'aamiyey iyo qaab qaabaysan.
Dhanka kale, dharka gacmeedka waxaa lagu abuuray gabi ahaanba gacanta. Labbis kastaa waa nooc ka mid ah tan iyo markii uu qof sameeyay. Dharka gacanta lagu sameeyo ayaa aad ugu saxsan cabbirkooda, sidaas darteed si fiican ayey ugu habboon yihiin.
Marka labaad, dharka diyaarka ah ayaa laga sameeyay qaabab horay loo sii go'aamiyay, laakiin cabbiradeenu maaha kuwo heersare ah sababtoo ah dhammaanteen waxaan nahay shakhsiyaad gaar ah. Qof kastaa waa mid gaar ah, taas oo u baahan in la isticmaalo template gaar ah.
Si kastaba ha ahaatee, inta badan naqshadda hadda jirta ayaa weli ku salaysan dharka diyaarsan, taas oo nolosha ka dhigaysa mid adag oo loogu talagalay haweenka aan ku habboonayn cabbirka caadiga ah.
Dharka gacanta lagu sameeyo ayaa ah jawaabta. Waxaad hadda u heellan kartaa alaabtaada si aad cabbirka uga dhigto sifo dhan walba leh. Samee sida waafaqsan shuruudaha macaamiishaada si isdaba joog ah oo waxaad ku socon kartaa wax weyn.
Shandad gacmeedyada gacanta lagu sameeyo oo aad samaysay waxay noqon kartaa shay cajiib ah haddii aad barato sida loo sameeyo nashqadaha quruxda badan kaligaa oo aad ku celcelin karto marar badan.
Shandad gacmeedyadan ayaa bixin kara tayo gaar ah iyo taxadar faahfaahsan, laakiin sidoo kale waxay siin karaan macaamiisha faa'iidooyinka iyo faa'iidooyinka lama filaanka ah. Aynu si qoto dheer u eegno iyaga.
Shaqada gacanta lagu qabto waxa ay cuntaa tamar ka yar shaqada lagu qabto khadka wax soo saarka ee weyn, taas oo ka dhigaysa mid deegaan ahaan u saaxiib ah. Tani waxay si gaar ah run u tahay haddii shayga suuq-geynta lagu sameeyay meel kale waana in loo diraa masaafo aad u badan si loo gaaro macmiilka.
Shaadhadhka naqshadeeyayaasha ee tayada leh ee aad bixin doonto aad ayay qaali ugu yihiin dadka qaar si ay u iibsadaan tanina waa sababo kala duwan oo ay ka mid yihiin in ay mararka qaarkood isticmaalaan agabyo qalaad sida maqaar alligator ilaa wax kasta.
Ujeedadu waa in aad u adeegi karto suuqa adiga oo bixinaya Logo funaanado ee ay doorteen. Waxa kaliya oo aad ka heli doontaa macaamiishaada inay doortaan calaamadahooda ka dibna waxaad u socotaa inaad soo saarto wax kasta oo tayo iyo tiro ah oo ay rabaan.
Dariiqa kale ee aad ku mari karto waa in la dhejiyo naqshadaada gaarka ah oo dadku ay soo iibsadaan sababtoo ah waxay u muuqdaan kuwo aad u fiican ama sababtoo ah ma qabaan calaamad aan caan ahayn.
Arag sidoo kale: 20+ Dukaammada ugu Dukaamaynta Badan ee 2022
Waxaa jira wax badan oo lagu sameeyo dambiisha hadiyadda taasina waa run sida ay tahay, laakiin waxaad u baahan doontaa inaad ogaato dhowr waxyaalood sida go'aaminta meesha aad rabto inaad ku socodsiiso ganacsigaaga dambiisha hadiyadda, barashada sida loo sameeyo dambiilaha hadiyadda, helitaanka a shatiga alaabta iyo meelaha aad u baahan tahay adiga oo waliba go'aaminaya nooca aad rabto inaad samayso iyo cidda alaab-qeybiyahaagu noqon doonaan.
Sahayda, waxaad u baahan doontaa waxyaabaha aasaasiga ah, sida Baskets, cellophane ama duub duub, xargaha, qaansooyinka, warqadaha midabaysan ama raffia, iyo walxaha qurxinta dhamaantood way fiican yihiin in gacanta lagu haysto.
Waxaad sidoo kale u baahan doontaa sahay nacnac ah, buskud, cabitaan, qaxwo, buskud, iyo macaanka si aad ugu riddo dambiisha.
Haddii aad rabto in aad samayso dambiisha ilmaha, waxa aad ku dari kartaa alaabta ay ka midka yihiin alaabta carruurtu ku ciyaarto, bustayaal, iyo nigisyada, iyo sidoo kale kareemka ilmaha, budada, iyo saabuunta.
Qubeyska xumbo, cusbada qubeyska, isbuunyada qubayska ama tuwaalada, kareemka jidhka, iyo shumacyada ayaa dhamaantood ah wax lagu dari karo dambiisha qubayska.
Ku bilow qayb yar/muunad barkimo ah kana iibi asxaabta iyo dadka aad taqaano si aad u hesho dareenka inta uu le'eg yahay badeecadaada (qiimaha/qayb/baahida guud, iwm.).
Haddii falcelinta ugu horreysa ay tahay mid togan, hel magac domain soo jiidasho leh oo samee degel weyn (mid aad u fudud maalmahan, soo qaado mid ka mid ah mawduucyada aan dhammaadka lahayn oo si qurux badan u naqshadee adiga keligaa).
XIDHIIDHKA: 10 Meesha Ugu Fiican Ee Lagu Iibsado Muraayadaha Aan Caymis Lahayn 2022
Fur dhowr akoonnada warbaahinta bulshada (Facebook, Twitter, iyo LinkedIn) oo bilow inaad ereyga ku saabsan alaabtaada u faafiso dadka ugu badan ee suurtogalka ah.
Hubi inaad had iyo jeer raadinayso siyaabo aad ku ballaariso shabakadaada ganacsiga iyo saamaynta iibka, iyadoon loo eegayn meesha aad joogto ama cidda aad la joogto.
Marka hore, soo saar farshaxanimo oo ku daabac sawirada shaqada ku jira ee baraha bulshada - tani waa meesha aanad u baahnayn inaad ceebayso ama aad ka welwelto dadka dhibsada mar haddii aanad yeeli doonin.
Dadku waxay ku raaxaystaan ​​daawashada farshaxanka horumarka iyo, dabcan, wadaaga alaabta dhamaadka. Ku billow inaad samaysato saldhig taageere oo xooggan, abuurista bog farshaxan oo Facebook ah, iyo abuurista degel farshaxan oo adiga kuu gaar ah.
Hel shabakad dhise heer sare ah…. oo bilow ururinta farshaxankaaga si aad u abuurto jidh shaqo oo xoogan, si aad u bilawdo, ka dibna u ogolaato naftaada inaad koraan.
Haddii dadku ay jecel yihiin shaqadaada Facebook, tusaale ahaan, waxaad samayn kartaa iib, ka dibna waa wareeg aan dhammaad lahayn oo suuqgeyn ah oo ku saabsan warbaahinta bulshada iyo ku biirista ururada fanka ee qarankaaga.
Arag sidoo kale: 25 Xirfado Sharci ah oo Guriga Lacag Ka Helaya 2022
7. Qurux badan dahabka
Waxaad samayn kartaa muunado noocyo kala duwan ah oo aad tijaabiso suuqa si aad u aragto waxa caanka ah - xitaa waxaad la bilaabi kartaa asxaabta iyo qoyska si aad u hesho jawaab celintooda - weydii waxa ay ugu jecel yihiin iyo waxa ugu yar, iyo sababta.
Midabada ay rabaan inay arkaan, iyo noocee ah ayay jeclaan lahaayeen inay arkaan? Waxa kale oo aad bilaabi kartaa wax iibinta Etsy ama fagaarayaasha kale ee la midka ah oo fiirso waxyaabaha ugu badan ee la dalbado.
Waxaad u baahan doontaa inaad ogaato cidda suuqa aad beegsanayso. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad eegto moodada hadda oo aad aragto waxa isbeddellada hadda jira si aad u soo saarto noocyada alaabtaada oo la jaan qaadaya isbeddellada dhowaanahan.
Waxaa jira suuq loogu talagalay silsiladaha furayaasha haddii aad maamusho inaad ku xirto iyaga. Waxaad samayn kartaa silsilado furayaal ah oo nashqado kala duwan leh oo aad ka heli karto suuqa maxaliga ah oo aad ku iibin karto mareegaha caanka ah ee aad u badan tahay inaad ka hesho dadka si ay u iibsadaan.
Faa'iidada kale ee silsiladaha furaha ayaa ah inay sameeyaan hadiyado aad u fiican waxayna ku habboon yihiin in lagu iibiyo carwooyinka farsamada gacanta. Way fududahay in la sameeyo, markaa haddii aad raadinayso inaad bilowdo iibinta farsamada gacanta, fikradahani waa meel cajiib ah oo laga bilaabo.
Goynta saxda ah iyo kartida tolida ee khabiirka ah daruuri uma aha koofiyadda DIY. Dhab ahaantii, qaar ka mid ah casharrada koofiyadaha ee aadka loo xasuusto waxaa ka mid ah shakhsiyaynta koofiyadaha jira ama samaynta koofiyada walxaha lama filaanka ah.
U iibinta alaabtaada dadka, makhaayadaha, roodhida dubista, iyo dukaamada tafaariiqda ayaa ah dhawr ka mid ah fursadaha ay heli karaan kuwa iskood u bilaabaya warshadaha keega.
Xulasho wanaagsan oo ah noocyada pie iyo dhadhanka oo ku salaysan caannimada iyo isbeddellada suuqa, oo ay weheliso dhiirrigelin wax ku ool ah iyo suuqgeyn, ayaa laga yaabaa inay kaa caawiyaan inaad jacaylkaaga u beddesho shirkad faa'iido leh oo qancisa.
Farshaxanku waa farshaxan saddex-geesood leh oo ka samaysan qalab adag ama jilicsan.
Waxay sidoo kale u qaadan karaan qaabka gargaarka dusha sare ama waxaa lagu dhejin karaa meelo kala duwan, sida tableaux iyo mawduucyo, si ay si buuxda u geliyaan daawadayaasha khibrada.
Alaabta buuxinta waxaa ka mid ah warqad, bireed aluminium ah, maaskaro ama cajalad rinjiile, iyo kartoonada. Qalabkan, ku dheji ama ku xidh kaliya qaababka aasaasiga ah ee farshaxanimadaada.
Arag sidoo kale: Waxa lagu sameeyo Warqad la jeexay: 22 Fikradaha Hal -abuurka ah
Haddii aad waligaa ku qasbanaatay inaad sameyso daahyada daaqadaha dhowr maalmood (ama toddobaadyo-ma xukumayno), waad ogtahay sida ay muhiimka u yihiin.
Daahyada, daahyada, iyo indhoolayaasha ayaa ah arrin muhiim u ah qurxinta qol kasta, maadaama ay labaduba faa'iido iyo bilicsan yihiin. Maxaa ka sii fiican? Way fududahay in la abuuro!
Waxaad ku iibin kartaa wax kasta oo aad rabto ka dib markaad adigu sameysid.
Samaynta keega Hadda waxa ay ka mid tahay waxyaalaha fudud ee la baran karo wakhtigan casriga ah. Mabaadi'da samaynta aasaasiga ah ayaa si toos ah u socota waxayna kaaga baahan yihiin inaad sameyso waxa loo baahan yahay.
XIDHIIDHKA: Sida loo iibsado ECOMI: Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Kobci oo ku celceli dareenkaaga. Taasi maaha mid adag ama sida qarsoodi ah sida ay u muuqato; uma baahnid inaad awood u yeelatid inaad ka abuurto cuntooyin cusub meel eber ah. Kaliya raac tilmaamaha, hana niyad jabin haddii ay si fiican u shaqeyn weydo marka ugu horeysa.
Caannimada barashada khadka tooska ah ayaa sii kordheysa. Tani waa fursad fantastik ah oo aad aqoontaada ugu shaqayso adiga. Waxaad u baahan doontaa inaad naqshadayso koorsada khadka tooska ah ee ugu iibinta badan si aad naftaada uga saarto tartankaaga oo aad u horumariso faa'iidadaada.
Waxaa jira dhowr waxyaalood oo kaa caawin kara inaad gaarto yoolalkaaga, laakiin kuwa soo socda ayaa ah talooyinka ugu muhiimsan ee kaa caawin kara inaad si degdeg ah u gaarto.
Haddii aad ku celcelisid waqti kugu filan, waxaad awoodi doontaa inaad sawirto sawirro cajiib ah. Dadku waxay rabaan inay iibsadaan sababtoo ah aad bay u fiican yihiin.
Haddaba, maxaa kaa hortaagan inaad bilowdo inaad iibiso daabacadaha? Waxaa jira dhowr siyaabood oo aad uga faa'iideysan karto iibinta daabacadaha.
Qormada iyo sawiradu waa inay sheegaan sheeko si kuwan loo iibiyo. Natiijo ahaan, waa muhiim in la qaado sawirro aan kaliya u muuqan kuwo aad u wanaagsan. Waa inay sheegaan sheeko.
Bilaabida blog-ka hadda waa mid ka mid ah siyaabaha ugu fudud ee lacag lagu kasbado khadka oo aad u hesho nooca madax-bannaanida ee ay ku siin karto shaqaale yar.
Si loo abuuro blog, uma baahnid inaad noqoto khabiir ama qoraa xirfadle ah. Akhristayaashaadu waxa ay raadinayaan talo la xidhiidhi karo. Waxaad noqon kartaa a blogger guulaystay haddii aad caawin karto oo aad la xidhiidhi karto.
Arag sidoo kale: Siyaabaha ugu Wanaagsan ee Lacag Loogu Sameeyo Blog -ka 2022 | Eeg Khiyaamadayada
Haddi aad door bidayso in aad samaysato ama samaysato waxyaalaha la isku qurxiyo, sida xoqida jidhka, waxa laga yaabaa in aad damacdo in aad samayso gacan, maydh, ama saabuun qurxin, gaar ahaan haddii baararka aad jeceshahay hadda la iibiyo ama ay adagtahay in la helo.
Saabuunta aad soo saarto ma dili doonto jeermiska, laakiin waxay u maydhi doontaa si wax ku ool ah sida saabuunta kale ee kale.
Halka shahaadada rasmiga ah aan looga baahnayn si aad u noqoto naqshadeeye garaaf, waa inaad si fiican u fahantaa waxyaabaha daruuriga ah.
Tan waxaa ku jira cadayashada fikradaha naqshadeynta iyo fahamka sida loo shaqaaleysiiyo dhinacyada sida midabka, isbarbardhigga, kala sareynta, dheelitirnaanta, iyo saamiga si wax ku ool ah shaqadaada.
Naqshadaynta garaafku waxay noqon kartaa hab aad naftaada lacag ku samaysato haddii aad ka barato habka wax loo qabto aasaaska. Waxaad ka samayn kartaa guriga oo aad ka shaqayn kartaa meel fog.
Haddii cookies-kaagu uu helay jawaab celin badan oo wanaagsan, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad sahamiso iibinta faa'iidada.
In kasta oo ay jiraan wax badan oo lagu iibinayo buskudka gacanta lagu sameeyo intii loo abuuri lahaa buskud iibinta dubista kaniisaddaada, haddii aad dareen u leedahay dubista iyo cunto karinta qoyska oo aan la barbar dhigi karin, waxay noqon kartaa go'aanka shaqo ee kugu habboon adiga.
Qaar badan oo ka mid ah kuwa horumariya abka, gaar ahaan kuwa cusub ee adiga oo kale ah, uma malaynayaan abka inay hanti tahay, haddana codsiyada, sida shirkad kasta oo dakhli soo saarta, ayaa laga yaabaa inay qiimo leh oo si joogto ah loo iibsado oo loo iibiyo.
Waa inaad marka hore hubisaa inaad awood u leedahay inaad iska iibiso software-kaaga ka hor inta aanad bilaabin habka aad isku dayayso inaad iibiso.
Arag sidoo kale: 50ka Apps ee Lacag-bixinta ugu Fiican Si aad Lacag Dheeraad ah u Hesho
Waxaa jira hal milyan iyo hal shay oo fudud oo aad ka samayn karto oo aad ka iibin karto meel kasta oo aad joogto oo aad lacag ka samayso. Waxyaabahani waxay u kala duwanaan karaan tan ilaa taas waxaana laga samayn karaa qalab aad u kala duwan.
Agabkaan waxa laga iibsan karaa inta badan suuqyada maxaliga ah ee kugu xeeran iyo online.
Waxaad iibin kartaa alaabta dhijitaalka ah oo waxaad samayn kartaa dakhli la taaban karo haddii aad ogtahay waxaad samaynayso. Dadku ma...
15ka Laabtoob ee ugu Qaalisan Adduunka 2022
Xilligii qaadashada laptops ee miisaankoodu yahay 8 rodol iyo wixii ka sareeya ayaa si tartiib tartiib ah u sii dhammaanaya. Tiknoolajiyada cusub ee laptop-ka…
Apps-ka ugu Fiican Darawallada: Waa in uu leeyahay apps loogu talagalay dhammaan darawallada
Dunida tignoolajiyada ayaa nolosha iyo shaqada ka dhigtay mid aad u fudud siyaabo badan. Sababta ayaan kuu sheegayaa…
10-ka Kareemka Ugu Qaalisan Adduunka
Jalaato waa macmacaanka ugu jecel. Waxay soo martay saamigeedii cadaaladda ahaa ee kobcinta dhadhanka…
15-ka Cognac ee ugu Qaalisan Adduunka
Sannadkii hore, iibinta Cognac ee Shiinaha ayaa ku booday 56% aan caadi ahayn. Sanadka 2021, wadar ahaan 223.2…